Iindlela ezili-15 zokufundisa isiNgesi kwi-Intanethi kubafundi baseTshayina ngeNzuzo 2022
Oktobha 16, 2021 Eze uThadayo
Iindlela ezili-15 zokufundisa isiNgesi kwi-Intanethi kuBafundi baseTshayina ngeNzuzo
Unokufundisa isiNgesi kwi-Intanethi kubafundi baseTshayina njengesiqendu esecaleni okanye umsebenzi osisigxina kwaye ufumane umvuzo ofanelekileyo ngokusebenzela ekhaya.
IsiNgesi lulwimi oluthethwayo kwindalo iphela, sithethwa kwizizwe zonke emhlabeni kwaye, kwezinye iimeko, sisetyenziselwa ukuvavanya ubukrelekrele bomntu. Ukuba unesakhono okanye ulwazi ofuna ukulubonisa kwihlabathi kwaye wamkelwe ngokukhawuleza, ukusebenzisa ulwimi lwesiNgesi kuya kukukhupha ngokukhawuleza nakwihlabathi liphela. Ukubaluleka kokuthetha isiNgesi ngokutyibilikayo nokusibhala ngokuchanekileyo akunakugxininiswa ngokwaneleyo.
Isakhono sinokukufumanela imisebenzi yamanye amazwe kunye nokunxibelelana okanye ukuba ufuna ukufundisisa phesheya, kuya kuza nakuwe njengoko kuya kufuneka uthathe uvavanyo lobuchule besiNgesi ukuba uvela kwilizwe elingathethi siNgesi. Abantu abavela kumazwe athetha isiNgesi abathethi ngoxinzelelo olukhulu kangangokuba umntu ongengowomthonyama uqhubeka xa kufikwa kumba wokungqina amandla abo okuthetha nokubhala isiNgesi.
Nangona kunjalo, ezo zithethi zemveli zesiNgesi zinokusebenzisa izakhono zazo zendalo ukwenza imali kwi-intanethi ukusuka kwinduduzo yamakhaya abo. Kwaye oku kukufundisa isiNgesi kwi-intanethi kubafundi, bobabini abadala kunye nabantwana. Nangona ingengabo kuphela abantetho isisiNgesi abanokuba ngabafundisi besiNgesi abakwi-Intanethi kodwa iiwebhusayithi ezininzi zifuna zona rhoqo.
Ukuba sisithethi sendabuko sesiNgesi ayisiyiyo kuphela imfuneko ekufuneka ubenayo ukuze ufundise isiNgesi kwi-Intanethi kwaye ufumane ngaphezulu, kukho nezinye iimfuno. Jonga ngokukhawuleza apha ngezantsi.
1 Izidingo zokufundisa isiNgesi kwi-Intanethi kuBafundi baseTshayina ngeNzuzo
2 Iiwebhusayithi zokufundisa isiNgesi kwi-Intanethi kubafundi baseTshayina
2.1 1. IVIPKID
2.2 2. EF IsiNgesi Kuqala
2.4 4. Iindlebe Zobugqi
2.5 5. UGogokid
2.7 7. Ukutya
2.8 8. Lungiselela
2.9 9. I-Classtalk
2.10 10. S-Izifundo
2.11 11. Intlanzi
2.12 12. Amandla e-Eigo
2.13 13. Ikalika yesiNgesi
2.14 14. IVIPX
2.15 15. Mna Umqeqeshi U
3 Iindlela zokufundisa isiNgesi kwi-Intanethi kubafundi baseTshayina
Izidingo zokufundisa isiNgesi kwi-Intanethi kuBafundi baseTshayina ngeNzuzo
Ukufundisa isiNgesi kwi-Intanethi, ootitshala kufuneka banelise ezi mfuno zilandelayo;
Ootitshala besiNgesi kufuneka babenesiqinisekiso se-TEFL, seCELTA, seTESL, okanye se-TESOL.
Yiba sisithethi sesiNgesi sendabuko (yahlukile kwiwebhusayithi) okanye isithethi esithetha isiNgesi
Ukufumana amava okufundisa kwangaphambili (kwahlukile kwiiwebhusayithi)
Bamba isidanga seminyaka emine se-bachelor kwimfundo, isiNgesi, okanye nayiphi na intsimi (enganyanzelekanga kwezinye iiwebhusayithi nangona).
Ikhompyuter yedesktop okanye ilaptop ehambelana neMac okanye iiWindows OS ezinekhamera yewebhu ekumgangatho ophezulu
Iseti yentloko enombhobho wonxibelelwano olucacileyo.
Unxibelelwano olukhawulezayo lwe-intanethi
Yiba nendawo efanelekileyo, oko kukuthi, indawo efanelekileyo yokuqhuba iiklasi zakho ngemvelaphi ecocekileyo nefanelekileyo kunye nendawo ethe cwaka. Ukukhanya okwaneleyo kunye nokukhanya kukwaqwalaselwe.
Ke, uyabona ukuba ukuba sisithethi sendabuko sesiNgesi ayisiyonto iphambili kwezinye iiwebhusayithi kuba unamava angaphambili kunye nesidanga se-bachelor kodwa iiwebhusayithi ezinje zezi zimbalwa kwaye, kwiimeko ezininzi, zihlawula kancinci.
Iiwebhusayithi zokufundisa isiNgesi ezikwi-Intanethi ziyinto kwaye abafundi kunye nabafundi abavela kuzo zonke iindawo zehlabathi, abanomdla wokuphucula isiNgesi sabo, banokujoyina. Ukufunda nge-Intanethi ngoku kuyindlela yokufunda entsha, abantu bafumana zonke iintlobo zeedigri ezivunyiweyo ngale ndlela kwaye akufuneki ushiywe kuyo njengoko kuninzi onokukufumana.
Le posti yebhlog yenzelwe ngokukodwa ootitshala abakwaziyo ukufundisa isiNgesi kwi-Intanethi kubafundi baseTshayina, nokuba ngabantu abadala okanye abantwana. Kwaye, nakwabafundi baseTshayina abafuna iindlela zokuphuhlisa amandla abo okuthetha nokubhala esiNgesi, ezi webhusayithi zizizixhobo ezilungileyo kwaye ziza nezibonelelo ezininzi.
Akukho mfundi okanye titshala akufuneki ashiye ikhaya lakhe, konke ukufunda nokufundisa kunokwenziwa kwimeko efanelekileyo nefanelekileyo ekufundeni nasekufundiseni. Izixhobo zokuthatha inxaxheba zizixhobo zedijithali eziqhelekileyo, ilaptop, ithebhulethi, okanye iPC eneekhamera ezicacileyo, iseti yentloko esebenzayo, kunye nonxibelelwano oluzinzileyo lwe-intanethi.
Ngokusebenzisa iiwebhusayithi ezidweliswe ngezantsi, unokufundisa isiNgesi kwi-Intanethi kubafundi baseJapan kwaye ufumane isixa semali esifanelekileyo ngaphandle kokuyeka uxanduva lwakho olukhoyo. Oku kuthetha ukuba ungadibanisa umsebenzi wokufundisa okwi-Intanethi nale uyenzayo ngoku okanye uthathe imfundiso ye-Intanethi njengomsebenzi osisigxina, ukhetho lwakho.
Iiwebhusayithi zokufundisa isiNgesi kwi-Intanethi kubafundi baseTshayina
EF IsiNgesi Kuqala
I-VIPKID isetyenziswa ngamawaka abafundi abavela kwihlabathi liphela ukuba bafunde isiNgesi kwi-Intanethi kwaye iwebhusayithi yenye yeendlela zokufundisa isiNgesi kwi-Intanethi kubafundi baseTshayina. Iwebhusayithi iyabhetyebela kootitshala kwaye inenqanaba eliphezulu lokuhlawula i-14 ukuya kwi-22 yeedola ngeyure kwaye ungutitshala, ungaseta ishedyuli yakho kwaye uqhube iklasi nganye-nye kunye nomfundi.
Ukongeza, iwebhusayithi ikunceda ucwangcise ikharityhulam yezifundo ukuze ungachithi ixesha ucwangcisa yonke loo nto kwaye endaweni yoko ujolise ekufundiseni. Ootitshala kufuneka baqinisekiswe yi-TEFL ngesidanga se-bachelor kuyo nayiphi na intsimi kwaye bazibophelele kwisivumelwano seenyanga ezintandathu zeqonga.
2. EF IsiNgesi Kuqala
IsiNgesi sokuqala yenye yeenkampani ezindala zokufundisa nge-Intanethi kwaye ngokusayina njengotitshala kwiwebhusayithi ungafundisa isiNgesi kwi-Intanethi kubafundi baseTshayina kwaye ufumane i-10- $ 17 ngeyure. Unokufundisa abantu abadala okanye abafundi abancinci njengeqela okanye ukhetho lomntu ngamnye kwaye usebenze ngeshedyuli ehambelana nendlela ophila ngayo.
Ikharityhulam yokufundisa ikwacwangciselwe kwangaphambili ukuba ujolise kuphela ekufundiseni. Kuya kufuneka ube unesatifikethi sokufundisa kunye nesidanga sebhatshela kuyo nayiphi na indawo ukuze usebenze ngesiNgesi sokuqala.
I-iTutorGroup yinkampani yemfundo ekwi-Intanethi nekomkhulu layo eShanghai, China, kwaye inokwaziwa ngokuba yiTutor ABC. Ukufundisa isiNgesi kwi-Intanethi kubafundi baseTshayina kule webhusayithi, kuya kufuneka ube uqinisekisiwe yi-TEFL ngesidanga se-bachelor. Ungaqhuba iklasi nganye-nye okanye iklasi yeqela elingedluli kubafundi abathandathu.
Apha, izixhobo zikwabonelelwa wena kwaye unokuba ufundisa abafundi baseTshayina okanye abantu abadala. Ukuhlawulwa ngeyure ukusuka kwi-5 ukuya kwi-22 yeedola kwaye unokufumana iibhonasi kunye nokuba ngcono ukuba uqhubeka usebenza nenkampani.
4. Iindlebe Zobugqi
Ukuba uvela kulo naliphi na ilizwe lamazwe athetha isiNgesi kwaye ufuna indawo engahambelaniyo nengxaki yokufumana imali kuyo, unokucinga ngokutyikitya kwiMicrosoft Ears kwaye ufundise isiNgesi kwi-Intanethi kubafundi baseTshayina. Iiklasi ziqhutywa umntu ngamnye ehlawula ukuya kuthi ga kwi-26 yeedola ngeyure. Uya kuba ufundisa kuphela abafundi abancinci baseTshayina abaneminyaka eyi-4-12 ubudala.
Ngokwenyani yinkampani esekwe eTshayina kwaye awudingi nesidanga se-bachelor ukuze ube ngutitshala kodwa kufuneka ube nesatifikethi sokufundisa njenge-TEFL okanye i-TESOL.
UGogokid uhlala ejonge ukuqesha abantu abanokufundisa isiNgesi kwi-Intanethi kubafundi baseTshayina. Iiklasi apha ziiseshoni ezizodwa kwaye uya kuba ufundisa abantwana ukusukela kwiminyaka emi-4 ukuya kweli-12 ubudala. Lukhetho olufanelekileyo phakathi kwabazali abafuna ukuba abantwana bafunde isiNgesi besebancinci. Ukuthatha lo msebenzi, kuya kufuneka ubambe isidanga sebhatshela, ube sisithethi sendabuko sesiNgesi, ufumane isatifikethi sokufundisa, kwaye ube neminyaka emi-2 yamava okufundisa.
Iimfuno zokufundisa kwi-Gogokids zezona zinzima kodwa intlawulo isengqiqweni kwi- $ 14 ukuya kwi-25 yeedola ngeyure kunye neebhonasi onokuzifumana ngokuxhomekeke kumlinganiso wokusebenza kwakho, amava kunye nenani leeyure ezikwi-Intanethi.
I-Italki lelinye lamaqonga apho unokufumana khona impilo efanelekileyo xa ufundisa isiNgesi kwi-Intanethi kubafundi baseTshayina. Le ndawo ikuvumela ukuba ukhethe amaxabiso akho kunye neeyure zokufundisa, nangona kunjalo, kunzima ngakumbi ukuba ngumqeqeshi kweli qonga. Inkqubo yokwenza isicelo ilula, kodwa kuya kufuneka ulungiselele iziqinisekiso zakho, ezinje ngesatifikethi sokufundisa esinedigri.
iTalki ngokwenyani iwebhusayithi apho ungafunda khona uluhlu olubanzi lweelwimi hayi isiNgesi sodwa. Iiklasi ziqhutywa umntu ngamnye ngengxoxo yevidiyo.
Ukuba awusisithethi sesiNgesi, ungabinamava okufundisa, awunaso isiqinisekiso sokufundisa, kwaye awunaso isidanga se-bachelor kodwa usafuna ukufundisa isiNgesi kwi-Intanethi kubafundi baseTshayina, emva koko iCambly yindawo yakho. Iziko lewebhu alinazo iimfuno zokwamkela ootitshala kwiwebhusayithi yabo, kodwa kukho iinkqubo ezinzima nezomeleleyo ekufuneka uzenzile ngaphambi kokuba wamkelwe.
Ukufundisa kwenziwa ngencoko yevidiyo okanye ngombhalo kwaye unokufumana ukuya kuthi ga kwi-10.20 ngeyure. Le webhusayithi isebenza ngokwahlukileyo kunabanye apha, akukho kharityhulamu imiselweyo, uya kwi-Intanethi, udibane nomfundi kwaye ubafundise isiNgesi nokuba kungokubhaliweyo okanye ukuxoxa ngevidiyo kunye nokulungisa iimpazamo zabo zegrama ukubanceda baphucule.
Iqonga elikwi-intanethi elikuvumela ukuba ufundise isiNgesi kwi-Intanethi kubafundi baseTshayina. Yinkampani yabucala yokufundisa enamawaka abafundi abakhutheleyo minyaka le. Nangona isiNgesi singesiso kuphela ulwimi okanye isihloko esifundiswa apha, sesinye sezona zithandwa kakhulu, ngakumbi phakathi kwabantu baseAsia.
Unokwenza ukuya kuthi ga kwi-60 yeedola ngeyure njengomqeqeshi kweli qonga, kodwa kuya kufuneka ube ngumqeqeshi oqinisekisiweyo ukuba isicelo sakho samkelwe.
KwiClasstalk, ungafundisa isiNgesi kwi-Intanethi kubafundi baseTshayina abaphakathi kweminyaka ye-6 kunye ne-10 yeminyaka ubudala. Njengotitshala omtsha, umvuzo ophakathi umalunga ne- $ 20 ngeyure kwaye uya phezulu ukuba ufundisa iiklasi ezininzi rhoqo ngenyanga. Iqonga likwalungiselela izixhobo zokufundisa zootitshala, ke ungakhathazeki ngokwenza enye.
Iimfuneko zibandakanya ukuba namava okufundisa unyaka omnye, isatifikethi sokufundisa, kunye nesidanga se-bachelor kwimfundo okanye nayiphi na intsimi.
Ngaba ujonge indlela yokwenza imali kwinduduzo yekhaya lakho? I-S-Lessons ikuvumela ukuba ufundise abantu abadala baseJapan kunye nesiNgesi kwi-Intanethi kwaye ufumane i-10 ukuya kwi-15 yeedola ngeyure. Akukho xinzelelo, akukho hambo; yonke into oyifunayo yikhompyuter, ii-headphone, kunye nonxibelelwano lwe-intanethi oluthembekileyo ukuze uqalise.
Ukuze usebenze njengomhlohli wesiNgesi eqongeni, kufuneka ube unesidanga se-bachelor, ubuncinci unyaka omnye wamava okufundisa, kunye nomnqweno wokusebenza ubuncinci iiyure ezili-10 ngeveki. Ishedyuli inokwenziwa ngokwezifiso, kunye nekhosi nganye ihlala malunga nemizuzu engama-22.
EPalfish kuya kufuneka ube unesidanga se-bachelor kuyo nayiphi na into enkulu okanye intsimi, uqinisekiswe yi-TEFL, kwaye ube sisithethi sendabuko sesiNgesi ngaphambi kokuba ukwazi ukufundisa isiNgesi kwi-Intanethi kubafundi baseTshayina. Uyakube usebenza nabafundi abancinci kwiminyaka emithathu ubudala, ke, kuya kufuneka ube namava okufundisa ukuze usebenze kakuhle naba bantwana.
Inesicelo esihambelana ne-Android kunye ne-iOS. Ungaseta amaxabiso akho ngeyure phakathi kwe- $ 10 ukuya kwi- $ 30 ngeyure.
12. Amandla e-Eigo
Unokufundisa isiNgesi kwi-Intanethi kubafundi baseTshayina bayo yonke iminyaka kwi-Eigo Power. Yenye yeendawo ezinceda abantwana bafunde isiNgesi kwi-intanethi. Ukuze ube ngumhlohli we-Intanethi apha, konke okufuneka ukwenze kukubonisa ukuba unezakhono zokuthetha isiNgesi, kwaye bavumela ootitshala abangahlaliyo. Izatifikethi zokufundisa kunye needigri zesidanga akudingeki, iyafana neCambly.
Umvuzo ophakathi wecandelo uthobeke kakhulu, ukusukela kwi- $ 5 ukuya kwi- $ 12 kuphela, ngokwe-avareji yomzi mveliso.
13. Ikalika yesiNgesi
ILime IsiNgesi yinkampani enenjongo yokuqhagamshela abafundi baseTshayina nootitshala besiNgesi. Bakhangela ootitshala abanokunceda abafundi ekubhaleni nasekufundeni kunokuba bajonge ekuthetheni. Olu lukhetho oluhle ukuba ukhululekile ukufundisa kunye nokuhlela izinto ezibhaliweyo zesiNgesi.
Uninzi lwabafundi ngabantwana abaphakathi kweminyaka emi-5 neli-12 ubudala. Iibhonasi zinikwa ootitshala abasebenza iiyure ezongezelelweyo okanye abanamanqanaba aphezulu. Isatifikethi sokufundisa kunye nesidanga sebhatshela kufuneka sisebenze apha. Ixabiso lokuhlawula liphakathi kwe- $ 16 kunye ne- $ 25 ngeyure.
I-VIPX licandelo le-TAL, lolunye lolwazi oluphambili lwemfundo yoluntu e-China kunye nenye yewebhusayithi ukufundisa isiNgesi kwi-Intanethi kubafundi baseTshayina. Ifemi iqeshe ootitshala besiNgesi abanokubonelela ngokufundisa umntu ngamnye kumaTshayina abantwana abaneminyaka emi-4 ukuya kweli-15. Phantse iipesenti ezingama-90 zootitshala ezicwangciselwe iiseshoni, eli qonga lelinye lawona manqanaba aphezulu okubhukisha kwimarike.
ICambridge kunye neNational Geographic ziya kukunika izixhobo zokusebenzisa. Ifu yexesha elizayo, iqonga elinxibelelana elivumela abafundi ukuba banxibelelane ngqo nootitshala, lisetyenziswa yinkampani. Uya kufumana iiyure ezingama-24 emva kwesifundo ngasinye ukubonelela ngempendulo ngokusebenza komfundi. Isidanga sebhatshela kunye nesatifikethi sokufundisa ziyafuneka. Ixabiso lokuhlawula li- $ 20 ukuya kwi-22 ngeyure.
15. Mna Umqeqeshi U
Kuluhlu lwethu lokugqibela lwewebhusayithi ukufundisa isiNgesi kwi-Intanethi kubafundi baseTshayina ngu-Coach U. yinkampani ehambelana nabafundi baseTshayina abanezithethi zesiNgesi. Inkampani esekwe eWuhan yenza amagumbi okufundela akwi-intanethi kunye neeseshoni zokufundisa kusetyenziswa iqonga lemfundo elikwi-Intanethi. Unokufundisa iqela labafundi ngexesha elinye okanye enye ngexesha. Unokwazi ukusebenza kumagumbi okufundela asekhaya ukuba ungutitshala wesiNgesi ohlala e-China.
Akunyanzelekanga ukuba ucwangcise izifundo zakho kuba iikhosi sele zilungisiwe. Ukongeza, umbutho uneqela lenkxaso yezobuchwephesha efumaneka iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezisixhenxe ngeveki ukukunceda ngayo nayiphi na imiba yokusasaza onokudibana nayo kwizifundo zakho zonke. Kuya kufuneka ube namava okufundisa ngaphambili, isidanga se-bachelor, kunye nesatifikethi sokufundisa ukusebenza kwiwebhusayithi.
Ezi ziwebhusayithi zokufundisa isiNgesi kwi-Intanethi kubafundi baseTshayina, ukuhlangabezana neemfuno ngaphambi kokufaka isicelo njengotitshala.
Iindlela zokufundisa isiNgesi kwi-Intanethi kubafundi baseTshayina
Nantsi indlela onokufundisa ngayo isiNgesi kwi-Intanethi kubafundi baseTshayina;
Qinisekisa i-TEFL okanye ufumane isatifikethi sokufundisa esamkelweyo nesaziwayo
Faka isicelo kwiinkampani ezikwi-Intanethi okanye kwiiwebhusayithi onokuthi ufundise kuzo isiNgesi kwi-Intanethi kubafundi baseTshayina njengale ingentla.
Ubungakanani kumahluko wexesha, kuxhomekeke kwindawo ohlala kuyo emhlabeni onokulindeleka ukuba usebenze kusasa, ngokuhlwa, okanye ngeempelaveki.
Guqula indawo ekhayeni lakho kwigumbi lokufundela elibonakalayo
Cwangcisa izifundo zakho, uninzi lwezi webhusayithi zicwangcisela izifundo zakho ngendlela
Yazi malunga nomdla wabafundi bakho
Khuthaza abafundi bakho.
Ngaba ndingasifundisa isiNgesi kwi-Intanethi kubafundi baseTshayina ngaphandle kwesidanga?
Ewe ungafundisa isiNgesi kwi-Intanethi kubafundi baseTshayina ngaphandle kwesidanga, ezinye zewebhusayithi apha azenzi ukuba ube nesidanga esinyanzelekileyo ukuba ufundise ngaso.
Ndenza malini xa ndifundisa isiNgesi kwi-Intanethi kubafundi baseTshayina?
Isixa semali osenzayo sokufundisa isiNgesi kwi-Intanethi kubafundi baseTshayina sixhomekeke kwiwebhusayithi kunye nenani lomsebenzi owubekayo kodwa umyinge oqhelekileyo uyi- $ 20 ngeyure.
Ndingasifundisa njani isiNgesi kwi-Intanethi e-China?
Khangela iiwebhusayithi ezikuvumela ukuba ufundise isiNgesi kwi-Intanethi kubafundi baseTshayina, i-15 kubo ichaziwe kwaye yaxoxwa kule posti yebhlog, ukuhlangabezana neemfuno eziyimfuneko, emva koko ubhalise kwaye uqalise ukufundisa.
Iiwebhusayithi ezi-13 eziPhezulu zokuFundisa isiNgesi kwi-Intanethi
Ngaba Umsebenzi we-ESOL wokuFundisa yeyona ndlela ilungileyo kuwe?
Iikholeji ezi-6 eziGqwesileyo zabaFundi beZidanga zesiNgesi abanemiGangatho yokuHlawula iMali
Iikhosi ezili-15 eziSimahla zeKhosi zoQeqesho lokuLungisa iiSelfowuni
Post Previous:Iiwebhusayithi ezi-13 eziPhezulu zokuFundisa isiNgesi kwi-Intanethi